Halbowlaha PSG Oo Wada-hadallo La Bilaabay Real Madrid, Laacibka Oo U Sheegay In Manchester United Dalab Soo Gaadhsiisay Iyo Kooxda Reer France Oo Doonaysa Inuu Old Trafford Tago - Cadalool.com
Halbowlaha PSG Oo Wada-hadallo La Bilaabay Real Madrid, Laacibka Oo U Sheegay In Manchester United Dalab Soo Gaadhsiisay Iyo Kooxda Reer France Oo Doonaysa Inuu Old Trafford Tago
March 25, 2019 Abdiwahab A. Abeye
Xiddiga kooxda kubadda cagta PSG ee Neymar ayaa wada-hadallo la bilaabay kooxda sida weyn loola xidhiidhinayo ee Real Madrid, waxaase intii ay wada-xaajoodyadu soceen uu u xaqiijiyey in sidoo kale ay la soo xidhiidhay Manchester United oo uu dalab ka helay.
Xiddiga reer Brazil ayaa laga doonayaa garoonka Santiago Bernabeu oo madaxweyne Florentino Perez uu damacsan yahay inuu noqdo hoggaamiyaha naadiga ee buuxinaya booskii uu banneeyey Cristiano Ronaldo oo xagaagii tegay si lama filaan ah uga degay Juventus.
Sida uu qoray wargeyska Don Balon, Real Madrid ayaa miiska la fadhiisatay Neymar iyo wakiilkiisa, waxaanay u bandhigeen sida ay u doonayaan inuu hoggaamiyo mashruuca dibu-habaynta Los Blancos ee uu gadh-wadeenka ka noqonayo Zinedine Zidane.
Wargeysku waxa uu intaa ku daray in Neymar uu u sheegay Real Madrid arrrin walaaceeda leh oo ah in Manchester United ay xilli horeba soo gaadhsiisay dalab ay ku doonayso inuu kaga dego Old Trafford, ayna kasoo martay dhinaca maamulka PSG.
Dhinaca kale, warar kale ayaa sheegay in PSG ay u sheegtay Neymar inuu aqbalo dalabka Manchester United oo diyaar la ah inay bixiso £300 milyan oo Gini, haddii kalena uu sii joogi doono PSG oo aan loo fasixi doonin Real Madrid.
27 jirkan oo xilligan dhaawac kaga maqan kooxdiisa, ayaa niyadda ugu dhisay Real Madrid inuu doonayo in Bernabeu uu iska xaadiriyo, balse aanay isaga wax walba gacanta ugu jirin ee uu yahay ciyaartoy koox kale go’aan ka gaadhayso.
Wargeyska The Independent ee kasoo baxa UK, ayaa waxa uu isaguna daabacay in Manchester United ay diiradda ku haysa laba ciyaartoy oo kala ah Jadon Sancho oo Borussia Dortmund ka tirsan iyo Philippe COutinho oo Barcelona ah, kuwaas oo tababare Ole Gunnar Solskjaer doonayo inay yimaaddaan ka hor bilowga xili ciyaareedka dambe.
Wargeyska kale ee Sports ayaa waxa uu isaguna caddadkiisii saaka ku daabacay war uu ku sheegay in Manchester United ay fursad wanaagsan u haysato laacibka Atletico Madrid ee Antoine Griezmann.
Si kastaba ha ahaatee, marka uu suuqa iibka ciyaartoygu furmo bisha June ayaa si rasmi ah ay wax walba bannaanka u imanayaan, waana xilliga ay caddaan doonto in Neymar uu saddex tallaabo mid uun qaato, kuwaas oo kala ah, inuu joogo PSG, inuu Madrid tago iyo inuu Man United u dhaqaaqo.